के सामाग्री एक घर निर्माण गर्न सस्ता छ? जहाँ एक घर निर्माण गर्न सामाग्री किन्न
एक घर निर्माण गर्न निर्णय, हामी ध्यान दिएर निर्माण प्रक्रिया नै, साथै पैसा बचत गर्न तरिकाहरू देख योजना। निस्सन्देह, आज आवासीय भवन निर्माण गर्न सस्ता मजा छन्, तर सुरक्षित, छनौट लायक छैन घर को निर्माण को लागि निर्माण सामाग्री। आज, यो आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न सम्भव छ र कुनै कम नवीन सामाग्री एक धेरै उच्च गुणवत्ता र राम्रो घर निर्माण गर्न सस्तो हुन सक्छ जब। र यति सामाग्री र बाहिर राम्रो-लाग्यो को चयन गर्न अगाडि बढ्न गर्नुपर्छ।
फ्रेम: सजिलो निर्माण!
आज, थप र प्राय आवास फ्रेम प्रविधिको निर्माण गरिन्छ। जो बाट सामाग्री छनौट एक घर निर्माण गर्न सस्ता छ फ्रेम मा धेरै स्टप विकल्प। यो आधारमा नियम, रूपमा लागत erected। ढांचे नै काठ वा धातु हुन सक्छ। यो उल्लेखनीय छ कि, एक घर को निर्माण को गति फरक पारिस्थितिक सुरक्षा, राम्रो थर्मल इन्सुलेशन गुणहरू, सञ्चालन मा स्थायित्व र सुरक्षा हुनेछ साथ। निर्माता फ्रेम घर यदि धातु फ्रेम, को काठ फ्रेम भने, 40 वर्ष को लागि खडा गर्न सक्नुहुन्छ, र 100 वर्ष पुरानो ग्यारेन्टी।
एक सरल निर्माण को प्रविधि, र यसैले आवश्यक कार्यकर्ता को एक टीम समावेश छैन। पहिलो घर को जग रूपमा सेवा गर्दैछन् जो फ्रेम, erected। खनिज ऊन वा पत्थर चट्टानहरु को थर्मल इन्सुलेशन को लागि सबै भन्दा अक्सर प्रयोग गरिन्छ। घर, पर्खाल को अर्थात् यो फ्रेम को निर्माण सामाग्री, फर्श, को बिरूवा मा निर्मित गर्दै छन्, र त्यसपछि यो रहेको छ जहाँ साइट, वितरित। बाहिरी फ्रेम आवश्यक sheathed दहनशील सामाग्री भित्र गैसकेट इन्सुलेशन र वाष्प बाधाओं आवश्यक छ।
एक फ्रेम घर सजाय
एक आवासीय सुविधा को बाहिरी भाग सुसज्जित गर्न, तपाईं पर्खाल काठको छेकवार, बसाई सराई, अनुहार ईटा वा स्टक्को, साथै मोहरा रंग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पूरा घरमा आज ठूलो संख्या मा प्रतिनिधित्व गर्दै छन् को लागि सामाग्री, त्यसैले आफ्नो विकल्प संग समस्या सही हुने छैन। सुविधा फ्रेम घरहरू तपाईं निर्माण पूरा भएको छ रूपमा बित्तिकै समाप्त गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले तिनीहरू, कम छैन भनेर। साथै, फ्रेम आवास - सबैभन्दा आर्थिक। सामाग्री मा एक महत्वपूर्ण बचत - पहिले, किनभने सामाग्री को सजिलो बलियो जग, र यो आवश्यक छैन। दोस्रो, खत्म - भित्र र बाहिर खत्म - छैन पर्खालहरु रूपमा आवश्यक सकिँदैन, र यति प्राप्त चिल्लो र पनि।
आज, फ्रेम घरहरू संख्या निर्माण लगभग 12%, उदाहरणका लागि, मास्को क्षेत्र छ। तर अर्थव्यवस्था र प्रविधिको दृश्य, थप सुविधा उपभोक्ताहरु यसलाई योग्य मूल्यांकन गर्छौं। त्यसैले, अर्थव्यवस्था वर्ग को घर भवन मा नै क्षेत्र को एक घर खरीद गर्न धेरै बारे फ्रेम प्रविधि लागत आधारमा दुई-मंजिल्ला घरेलु निर्माण गर्न।
काठ - परम्परागत सामाग्री
धेरै विश्वास घर लागि सबै भन्दा राम्रो सामाग्री कि - एक रूख। तिनीहरूले सही हो, तर यो रूख आवास निर्माण को लागि सबै भन्दा महंगी समाधान छ। निस्सन्देह, त्यहाँ लागत कम गर्ने प्रविधिहरू छन्। उदाहरणका लागि, ठोस काठ को प्रयोग। यो आवासगृह, आधुनिक गर्न उत्तेजित गर्दछ यो प्रोफाइल मा एक परम्परागत घर छ। तर काठ भवन पनि बेफाइदा हो, र तिनीहरूलाई को सबै भन्दा महत्वपूर्ण - जो सम्भव विरूपण प्रक्रियाहरू असर गर्छ, घर मा दबाव, साथै थप परिष्करण लागि समय वृद्धि। यो निर्माण को प्रविधि पालन गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनभने छ।
Glulam: सुन्दर तर महंगा
आवास निर्माण संग, धेरै सामाग्री एक घर निर्माण गर्न सस्ता छ के को तथ्यमा आधारित। तर, यो दृष्टिकोण सधैं सही, सबै प्रमुख भूमिका यस्तो विश्वसनीयता र आवास को स्थायित्व रूपमा गुण खेल्न रूपमा छ। किनभने यसलाई कम छैन र deform छैन यस सन्दर्भमा, glulam पूर्ण फिट। शायद, यो बीम को सुकाउने कोठामा बित्दै किनभने, निर्माण उच्चतम गुणस्तर सामाग्री को छ। यो तत्व बासिन्दा लागि पूर्ण सुरक्षित छ भन्ने एउटा वातावरण जिम्मेवार निरूपण सँगै चिपके छन्।
राउन्ड लग: घर रूसी वास्तुकला को परम्परा मा
किनभने, उत्कृष्ट - काठ सामाग्री एक घर निर्माण गर्न तिनीहरूले उत्कृष्ट गर्मी बचत गुणहरू, पर्यावरण सुरक्षा, र पनि "breathable" संरचना द्वारा विशेषता छन्। कारण यो यो कुनै पनि प्रक्रिया संरचना बस छैन आवश्यक छ देखि, निर्माण प्रक्रिया मा सुरक्षित गर्न सम्भव छ। यस मामला मा, अर्थव्यवस्था को आकार कसरी निको घर परियोजना निर्भर हुनेछ।
कुनै पनि मामला मा लग बनेको आवास निर्माण, आर्थिक हुनेछ। पहिलो, सजिलो सामान, र यो अन्तर्गत जग खोक्रो आवश्यक छ। दोश्रो, एक कोठा मा एक निश्चित रंग सिर्जना गर्नुहोस्, र यसरी, बस काम खत्म लागि आवश्यक छैन गर्न राउन्ड लग।
Aerated ठोस - ईटा एक योग्य वैकल्पिक
ग्याँस सिलिकेट ब्लक र aerated ठोस बिस्तारै पुरातन ईटाहरु यति लोकप्रिय प्रतिस्थापित। निस्सन्देह, यो बिस्तारै जमीन गुमाउने छ, र यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण drawback - यो कम इन्सुलेट गुण छ। कि यो एक ईटा घरमा काठ बनेको एक घर भन्दा चिसो हुनेछ बाहिर जान्छ, छ। यसको इन्सुलेशन मुद्रा को एकदम धेरै हुनेछ, तर कारण थप र थप निर्माण गर्न एक घर सस्ता छ देखि सामाग्री को विकल्प, यो ठोस ब्लक र aerocrete प्रयोग गरिन्छ।
पहिले, तिनीहरूले जसबाट को seams यसलाई सम्भव बचत गर्न बनाएर, सही नै ज्यामिति र आकारहरू भिन्न। अक्सर गोंद को केवल एक सानो रकम को सम्बन्ध गाँसिसकेको जोइन्टहरूमा लागि। दोश्रो, यो एउटा सानो घर को निर्माण नै ईटाहरु को भन्दा कम हुनेछ किनभने यो सामाग्री एकदम मोटा छ, र। तेस्रो, भौतिक धेरै सजिलो र छिटो छ राख्नु। राम्रो र fourthly, aerated ठोस ज्योति हो र यसैले यसलाई अन्तर्गत पनि गहिरो जग आवश्यकता छैन। , कि यसको निर्माण महत्वपूर्ण बचत हुनेछ छ।
भौतिक रूपमा विशेष गरी aerated ठोस
निर्माण लागि यो सामाग्री प्रयोग गरेर हामी पर्यावरण मित्रता र सुरक्षा को आवश्यकताहरू पूरा हुनेछ भनेर एक घर निर्माण गर्न सक्छन्। खैर, पर्यावरण सुरक्षा धेरै को लागि - मुख्य सूचक गर्दा घर निर्माण गर्न जो देखि एक सामाग्री छनौट। यो aerated ठोस पर्खाल धेरै प्रभावशाली आंकडा छ सात घन्टा, बारे भारी आगो अन्तर्गत खडा गर्न सक्ने विचारणीय छ। आगो प्रतिरोध औद्योगिक आवासीय देखि धेरै फरक क्षेत्रको वस्तुहरु को निर्माण aerated ठोस प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ।
कारण उच्च पर्यावरण सामाग्री पनि राम्रो पानी वाष्प permeability देखाउँछ। बालुवा, पानी र कागती: यो aerated ठोस प्राकृतिक र प्राकृतिक कच्चा माल सिर्जना छ भन्ने तथ्यलाई द्वारा हासिल छ। तदनुसार, कुनै अशुद्धताओं र हानिकारक पदार्थ छ। यो पनि यसलाई प्रत्येक एकाइ एक निश्चित आकार दिने, एक साधारण देख्यो, ड्रिल संग कटौती गर्न सकिन्छ, कि aerated ठोस प्रक्रिया सजिलो छ महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई त्यसैले ती वस्तुहरू छन् कि रोचक वास्तु आकार दिइनेछ लागि अपरिहार्य सामाग्री छ।
निर्माण गर्न एक घर सस्ता छ देखि सामाग्री छनौट, यो miscalculate छैन महत्त्वपूर्ण छ। उदाहरणका लागि, निर्णय aerocrete उपयुक्त भन्दा बढी प्रयोग गर्न। पहिलो स्थानमा यस्तो सामाग्री को पर्खालहरु यो चरण मा यो लगभग आधा बचत गर्न सम्भव हुनेछ, कम लागत, क्रमशः निर्माण गरिने हुनाले। यो धेरै तरिका यस्तो काठको फल्याक वा इँटा रूपमा उच्च थप पारंपरिक सामाग्री यसको विशेषताहरु देखि, एक सभ्य विकल्प छ - यो सामाग्री aerocrete महत्त्वपूर्ण छ।
रोचक र आधुनिक समाधान
एकदम मूल निर्णय घर निर्माण गर्न स्क्रैप सामाग्री को इच्छा हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, धेरै कि संकुचित घास वा पराल को ब्लक को निर्माण लामो समय आश्रय सुनेका अमेरिकामा। यो पहिलो यस्तो भवन XIX सताब्दी मा निर्माण गरिएको थियो, तर यो एक गाई खाए किनभने यो धेरै वर्ष को लागि staid विचारणीय छ। थप आधुनिक समयमा, अर्थात् 1940 मा, पराल को उत्पादन व्यावहारिक अभाव गर्न, किनभने त्यहाँ थप मजबूत र गुणस्तर आवास निर्माण गर्न औद्योगिक निर्माण प्रविधिहरू थिए आउनुहोस्। तर, निर्माण को यस प्रकार को लाभ अझै पनि छ:
कम लागत, एक एकाइ देखि पराल एक ईटा भन्दा सानो बारेमा 1,000 पटक खर्च गर्न सकेन;
भौतिक सार्वजनिक डोमेनमा हुनेछ;
प्रकाश वजन, र लागि भवन को निर्माण एक विशाल जग आवश्यक छैन, निर्माण बाहिर तंत्र नउठाई हुनेछ गरियो।
कसरी हुन सक्छ?
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, निर्माण लागत धेरै कारक मा निर्भर गर्दछ। यो भविष्यमा आवास को सही डिजाइन, र सामाग्री र निर्माण प्रविधिको अनुपालन चरणहरु को विकल्प एक ध्वनि दृष्टिकोण छ। यी nuances को लेखा प्रणाली को मामला मा एक राम्रो र ठोस घर, केवल एक लामो समय को लागि खडा गर्दैन निर्माण गर्न सम्भव छ, तर सेवा मा खर्च हुनेछ।
अस्तर - गुणस्तर र सुन्दरता।
सबै आवश्यकताहरु संग बाडे भाग
Plasterboard लागि प्रोफाइल। जिप्सम बोर्ड लागि प्रोफाइल आयाम
काठ-ठोस ब्लक: कमीकमजोरी, समीक्षा, विनिर्देशों
फर कलरसँग कोट: तिनीहरू के छन् र उनीहरूलाई कसरी लुगा लगाउँछन्
म मेरो भावना कुरा गर्नुपर्छ?
संगीत को वार्षिक तिहार - को "Kazantip" कहाँ छ?
KamAZ-43269 "शॉट" (बीपीएम-97): विशेषताहरू, फोटो। कामअज-43269 "दोजर" (बीएमपी-9 97 "भिस्टेल")
घरको कला - शर्टलाई कसरी ठीकसँग लोभ गर्न सकिन्छ।
किसमिस संग क्रीम सस मा टर्की
हेल्मुट श्मिट: जीवनी, राजनीतिक दृष्टिकोण
महिला मा बवासीर को मुख्य लक्षण